February 28, 2021 - Padaethar
သီးစုံအချဉ်ပေါင်းရောင်းသူ မုံရွာမြို့ မတင်တင်အေး အဖမ်းခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေ့ဆုံခြင်း
” အမလုပ်တာ ဘာမှမရှိတာ။ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ အချဉ်ပေါင်းဝေတာပဲရှိတာ ” သီးစုံအချဉ်ပေါင်းရောင်းသူ မုံရွာမြို့ ထန်းတော ညောင်ရိပ်သာရပ်ကွက်နေ မတင်တင်အေး နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။ မတင်တင်အေးသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က ဈေးရောင်းနေစဉ် အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ယခင်ရက်များက ဆန္ဒပြလူထုကို ၎င်းရောင်းချသော အချဉ်ပေါင်းများ လိုက်လံဝေငှ ကျွေးရာမှ လူမှုကွန်ရက်ဖေ့စ်ဘွခ်တွင် ၎င်း၏ စေတနာအပေါ် လူအများက တုန့်ပြန်ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ MGZ- မနေ့က ဖမ်းခံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပြောပါဦး။ TTA- မနေ့က ဗိုလ်ချုပ်လမ်း မိတ်ဆက်လမ်းထိပ်က အမသစ်သီးဆိုင်မှာကူနေတာ။ သူတို့က လိမ္မော်သီးတွေ သိမ်းသိမ်းဆိုတော့ လိမ္မော်သီးတွေက တစ်ယောက်တည်း သိမ်းလို့မပြီးဘူး၊သုံးလေးယောက်သိမ်းမှပြီးတဲ့ဟာလို့ ပြောတာ။ အဲလို ပြောရမလားဆိုပြီး ဝိုင်းရိုက်တယ်။အထဲထိကို ဝင်ရိုက်တာ။ အရပ်ဝတ်နဲ့တစ်ယောက် သူပဲသူပဲ ဆိုပြီး လေးငါးခြောက်ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဆိုင်ထဲကနေ … Read more
မသေခင် အိမ်က အမေဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့သေးတယ်….
သူကျဆုံးသွားပြီ….သားကိုထိသွားပြီ အမေရေတဲ့ မသေခင် အိမ်က အမေဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့သေးတယ်…. ဘာလက်နက်မှမပါပဲ အိတ်လေးတစ်လုံးရယ်,အစာပြေစားဖို့ပေါင်မုန့်လေးတစ်ထုပ်ရယ်… ဖုန်းနဲ့ပါဝါဘဏ်လေးရယ် ငွေလေးရယ် ဆေးလိပ်နဲ့မီးခြစ်လေးရယ်ပဲပါတဲ့ကလေးကို လက်နက်အားကိုးနဲ့သတ်လိုက်ကြတယ်။ မအေလိုးတွေ …. မင်းတို့ကို ကမ္ဘာမကြေဘူး ယ​နေ့ လှည်းတန်းတွင် ကျဆုံး​သော ​ကျောင်းသား ညီညီ​အောင်ထက်နိုင် ယ​နေ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်အဝေးသင်မြန်မာစာနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်(၂၃)နှစ်သည် စစ်တပ်နှင့်ရဲ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၀မ်းဗိုက်ကိုကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ​ပြင်းထန်စွာရရှိကာ ယနေ့ ကျဆုံးသွားသဖြင့် ဝမ်းနည်း​ကြောင်း ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်)က ​ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။Khit Thit unicode သူကဆြုံးသှားပွီ….သားကိုထိသှားပွီ အမရေတေဲ့ မသခေငျ အိမျက အမဆေီကိုဖုနျးဆကျပွီး အကွောငျးကွားခဲ့သေးတယျ…. ဘာလကျနကျမှမပါပဲ အိတျလေးတဈလုံးရယျ,အစာပွစေားဖို့ပေါငျမုနျ့လေးတဈထုပျရယျ… ဖုနျးနဲ့ပါဝါဘဏျလေးရယျ ငှလေေးရယျ ဆေးလိပျနဲ့မီးခွဈလေးရယျပဲပါတဲ့ကလေးကို လကျနကျအားကိုးနဲ့သတျလိုကျကွတယျ။ မအလေိုးတှေ …. မငျးတို့ကို ကမ်ဘာမကွဘေူး ယနေ့ လှညျးတနျးတှငျ ကဆြုံးသော ကြောငျးသား … Read more
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ပါနဲ့…
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ပါနဲ့… လူတိုင်းကတော့ လှတာာမက်တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေက လှတာလေးတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ တကယ်တမ်း လက်တွဲမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ လှနေဖို့လိုအပ်သလားဆိုရင် သူတို့ကတော့ လိုတယ်လို့ပဲဖြေမှာပါပဲ။ လှတာထက် ဒီလိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကိုတော့ မင်းလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ သူတို့က တကယ်ပဲ မင်းဘဝအတွက်အထောက်ကူဖြစ်စေမယ့် ၊ လမ်းပြပေးနိုင်မယ့် မိန်းမကောင်းတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်သူ” မင်းချစ်တဲ့လူက ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးနိုင်မယ် ထင်လား။ ပေးခဲ့ရင်လည်း ခဏပါပဲ။ ကိုယ်ကချစ်ပေမယ့်ထင်သလောက် မပျော်ရတဲ့ အချိန်တွေရှိမှာပါ။ အဓိက သူနဲ့ကိုယ်ကြားမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စတွေပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပေါ့။ သူ့ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ အေးချမ်းသွားတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးမိန်းကလေး တိုင်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်းဆီကသာ မင်းရနိုင်မှာပါနော်။ … Read more
သင့်ကို အသက်နဲ့အျမှချစ်တဲ့ ယောကြာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မြိုး.
သင့်ကို အသက်နဲ့အျမှချစ်တဲ့ ယောကြာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မြိုး. အချစ်ဆိုတာ နှလုံးသားချင်း ဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ် ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါနော်..။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင် ထားရပြီးလား။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပိုလိမ္မာပါတော့နော် (၁) သင့်ကို နားလည်မှုအပြည့်ပေးထားတယ် ” သင့်ကို ဘယ်လောက်တောင် ချစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ကို ချုပ်ချယ် ထားတာမျိုး မရှိဘဲ သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် အမြဲ နားလည်မှု ပေးထားသူ တစ်ယောက်ပါ။ မကောင်းတာ ဆိုရင်တော့ ဆိုးဆုံးမ တတ်တာက လွဲရင် သင့်ကို အမြဲ လွတ်လပ်စွာ နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ နေခိုင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွား မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ပေး … Read more
ချစ်သူထားမယ် ဆိုမောင်လေးတွေကိုရွေးပါ..။ မောင်လေးတွေ က အရမ်းချစ် တတ်ပြီး အရမ်းလည်း ဂရုစိုက် တတ်တရ် မနူး မနပ် အရွယ်ကလေးတွေ မို့ကိုယ့် ချစ် သူ အပေါ် ဂျီ ကျပီး ကလေး လို ဆိုးမရ်..။ ဒါပေမဲ့ သူ့ချစ် သူစိတ် အားငရ်နေ ချိန် ဆိုရင်တော့ လူကြီးတွေလို အားပေးစ ကားတွေ နဲ့ မနှစ် သိမ့်နိုင်ပေ မဲ့ချစ် စရာအသွင်လေးတွေ နဲ့ပျော် ရွှင်အောင် လုပ်ပေး နိုင် သူတွေ ပါ..။ သူ အရမ်း ချစ်ရ တဲ့သူ သာဖြစ်ကြည့် သည်း သည်း လှုပ် အ ထိမ ခံဖြစ်ပြီး သူု့ ချစ် … Read more
ချစ်ပြတာနဲ့ ချစ်တတ်တာ ဘာကွာလဲ သိလား ….မသိရင် ပြောပြမယ် …
ချစ်ပြတာနဲ့ ချစ်တတ်တာ ဘာကွာလဲ သိလား ….မသိရင် ပြောပြမယ် … Fb ပေါ်မှာ tag လိုက် ၊ ပုံတင်လိုက် ၊ comments တွေမှာ ပလူပျံလိုက်နဲ့ တအားချစ်ပြတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများက အဲ့ဒီကောင်မလေးကို တကယ်လက်ထပ်ယူတာ ရှားတယ်။ (မရှိဘူးမပြောဘူးနော်.. ရှားတယ် ပြောတာ.. ဟုတ်ရင်နာပေါ့.. ကိုယ်က အဲ့သလို မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဆက်ဖတ်)ကိုယ်တိုင်လည်း cmt ရေးမှ ၊ အသဲပေးမှ ချစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ ။ အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့သူကို ရွေးဖူးတယ် ။ သူက ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တာပဲပေါ့ ။ နောက်ဆုံးတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူကပဲ အသစ်ရသွားတယ်။ ကိုယ့်အသိ ကောင်မလေးဆိုရင် သူ့လူကြီးက cmt မရေးဘူး။ ဘယ်တော့မှ သူ့ … Read more
အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တဲ့ ချစ်သူတွေဆိုတာကတော့ အေးအတူ ပူအမျှ ဆိုတဲ့ စိတ်က အလိုလို ပေါ်ပေါက်လာပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။ အခြေအနေတိုင်းမှာ ချစ်သူ ဘေးနား ရှိနေချင်ပါတယ်။ ချစ်သူလေးတို့ရေ ကိုယ်ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို တကယ်ပဲ ချစ်တာလား။ ချစ်သူလေးကရော ကိုယ့်ကို တကယ် ပြန်ချစ်နေတာလား။ ချစ်ခြင်းဆိုတာ အခြေအနေ အချိန် အခါနဲ့ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အချစ်နဲ့ ချစ်တာလား။ ဘယ်အရာမှ ကြားဝင် မနှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ ချစ်တာလား ဆိုတာကို ဆန်းစစ်နိုင်အောင် Marry က ပြောပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ သူ့ အပူတိုင်း ကိုယ့်အပူလို့ ခံစားရတယ် လူဆိုတာကတော့ ပူပန် သောကတွေနဲ့ မကင်းတဲ့ သက်ရှိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ … Read more
ချစ်သူ ရထားပေမယ့် တစ်ဖက်သတ် အချစ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေ ကြုံရတဲ့ အချက်များ
ချစ်သူ ရထားပေမယ့် တစ်ဖက်သတ် အချစ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေ ကြုံရတဲ့ အချက်များ ချစ်သူထားတယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က အပြန်အလှန် အချစ်တွေ ပေးပြီး အချစ်ရေးကို တည်ဆောက်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ ချစ်သူရထားပေမယ့် ချစ်သူရထားတယ်လို့ မခံစားရတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချစ်ရေးက အရမ်းကို တဖက်သတ်ဆန်တဲ့ အခြေအနေကို ရနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်သတ်ချစ်နေရတဲ့ အချစ်ရေးမှာ ရောက်ရှိနေသလားဆိုတာကို ဒီအချက်တွေနဲ့ ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူ ရထားပေမယ့် တစ်ဖက်သတ် အချစ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေ ကြုံရတဲ့ အချက်များ အမြဲတမ်း သင့်ဘက်ကပဲ စရတယ် သင့်ဘက်ကပဲဖုန်းစခေါ်တာမျိုး၊ ဆက်သွယ်တာမျိုးမလုပ်ရင် စကားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သင်ကပဲ တစ်ဖက်သတ် ချစ်ရတဲ့အချစ်ရေးကိုရနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကစဆက်သွယ်ရင်တောင်မှ ခြောက်ကပ်ကပ်တုန့်ပြန်ပြီး စိတ်ပါလက်ပါ ရှိတာမျိုးမတွေ့ရဘူး ဆိုရင်တော့ပိုပြီး သေချာနေပါပြီ။ … Read more
မိန်းကလေးတွေကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစေတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးဖက်ကအမှားများ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဥစ္စာ၊စည်းစိမ်၊ဂုဏ်၊ ပကာသနတွေထက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုပဲ လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ယောက်ျားလေးဖက်က အသေးအမွှားလို့ထင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေ၊ဂရုမစိုက်မှုလေးတွေက မိန်းကလေးတွေကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစေတာကြောင့်အသေးအမွှားလေးတွေ များလာတဲ့အခါ မလှမပနဲ့ ဇာတ်သိမ်းသွားရတတ်ပါတယ် …။ ဒါကြောင့် ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတွေကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစေတဲ့ ယောက်ျားလေးဖက်က အမှားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပြီဆိုရင်တော့ ချစ်သူကိုမဆုံးရှုံးခင် ပြင်ဖို့ လိုနေပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတော့နော် … (၁) အမြဲလိုလိုတခြားအရာတွေကို ဦးစားပေးတယ်” မိန်းကလေးတွေဟာချစ်သူရဲ့ နံပါတ် ၁ နေရာမှာရှိချင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒီလိုပြောလို့ သူတို့ကအတ္တကြီးတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နံပါတ်၁ နေရာမှာထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့နံပါတ် ၁ ဖြစ်ချင်တာဟာ အပြန်အလှန်သဘောတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေတော့ ပြသနာမရှိပေမယ့်အမြဲလိုလို အလုပ်၊ မိသားစု စသဖြင့် တခြားအရာတွေကိုပဲ … Read more
ချစ်လို့ သဝန်တိုတဲ့သူအပေါ် ဂရုစိုက်ပေးပါ သဝန် တိုတယ် ဆိုရာမှာ နှစ်မျိုးရှိ ပါတယ်။ တစ်မျိုးက အချော့ခံချင်လို့ ,နောက်တစ်မျိုးက တစ်ကယ် စိတ်ပူလို့ သဝန်တို တာဖြစ် ပါတယ်။ အချော့ခံ ချင်လို့ သဝန်တိုတယ် ဆိုတာက..သူ့စိတ်ထဲမယ်သူ့ချစ်သူရဲ့သူမအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းဖွဲ့ အလင်္ကာကို နားထောင် ချင်လို့ ခဏခဏကြား ချင်လို့ အဲဒီ စကားလေးတွေ ခဏခဏသ တိယပြီး စိတ်ထဲပျော် ချင်လို့ ,့ကြည်ကြည် နူးနူး နဲ့ပြန်တွေးပြီးပြုံချင်လို့ သူ့ချစ်သူက ကိုယ်ချစ်သလောက် ချစ်များချစ် ရဲ့လား အချစ်စမ်းချင်လို့ သဝန်တိုတာမျိုး အဲဒါမျိုး တစ်ကယ် စိတ်ပူလို့ သဝန်တိုတာကျ ခံစားရတဲ့သူက သိပ်သနားဖို့ကောင်း ပါတယ်။သိပ်ပူလောင်ရတယ်။ သူက..ကိုယ့်မမြင်ကွယ်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို များသဘောကျ သွားပြီလား ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိသလို ကိုယ့်ချစ်သူကို … Read more